Ukuhlanganiswa okukhawulezileyo koKwakha uKwakha uLwakhiwo
Inkqubo yokwakha eyenzelwe wena ukuba unemizobo kunye neenkcukacha zobuchwephesha, wamkelekile ukuthumela kuthi ngalo naliphi na ixesha. Injongo yethu ayikokubonelela kuphela ngesakhiwo sodidi oluphezulu, kodwa kunye nokugcina ulwalamano lomntu kunye noluntu kunye nomthengi ngamnye. Enoba enkulu okanye encinci imfuneko sakho siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze ukuhlangabezana nemfuno yakho. Inkonzo yokumisa enye kuyilo, ukwenziwa, ukuhanjiswa kufakelo nasemva kwenkonzo. 1.We ukuvelisa ngokungqongqo ngokwe d yakho ...
Isakhelo sesinyithi esikhanyayo sesakhiwo esenziwe kwangaphambili sentsimbi sogcino lwesakhiwo
Inkqubo yokwakha 1. Ukuthembeka okuphezulu komsebenzi wesinyithi. Ixesha elide lokusebenzisa ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-50. ● Ubume bentsimbi yimpembelelo, izinzile kwaye ilungile ngokuchasene neenyikima ubunzima abukhaphukhaphu. ● Isakhiwo sentsimbi esisetyenziselwa inqanaba eliphezulu lokwenza imveliso. ● Izakhiwo zensimbi zinokudityaniswa ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, ukonga ixesha kunye nokugcina abasebenzi. ● Indawo enkulu yangaphakathi yentsimbi okanye isakhelo sesinyithi, ubude obukhulu besakhiwo sentsimbi banokufikelela kuma-80meters. ● Kunokubangela ukuba kutywinwe. ● Intle ...
Ixabiso eliphantsi loyilo lokwakha isinyithi esikhulu sithuba esinye sodidi lwesakhiwo sentsimbi esinamagumbi amabini
1.Ukufaka uhlobo lwethu olutsha lwentsimbi kulula ngakumbi ukuyifaka, i-2,000 yeemitha zesikwere inokugqitywa ngaphakathi kweveki enye ngabasebenzi aba-5. 1) Izakhelo eziphambili zentsimbi (ulwakhiwo) zonke ziqhagamshelwe ziibholiti ezinamandla aphezulu, akukho mfuneko yokuwelda kwindawo. Ukufakwa kwayo kuyafana neebhloko zokwakha. (2) Zizonke iintlobo ezi-2 zee-purlins ziya kusetyenziswa eluphahleni nakwiindonga zoLwakhiwo lwethu lweNsimbi. (zincinci ezi-4 iintlobo zee-purlins eziza kusetyenziswa kuphahla kunye neendonga ngenye into eyenziweyo ...
China best isakhelo umthengisi isakhelo umaleko iqanda chicken yokuhlala iinkukhu uyilo indlu uyilo uyathengiswa eKenya
1.Iinkukhu indlu Vanhe Modular House Co., Ltd ngumvelisi ngobuchule isakhiwo sentsimbi e-China. Uyilo, unikezelo & fakela izakhiwo zentsimbi IAlgeria, iDubai, iSaudi Arabia, iThailand, iAustralia, iFrance, iJamani njlnjl. Ubume be-customi ...
Intengiso eshushu Isinyithi esineMvula yokuXhathisa kweMvula yentsimbi Ulwakhiwo lwenkukhu ekhaya Iinkukhu House Inkomo yeFama yokwakha
1.VANHE Iinkuku House Vanhe seemodyuli House Co., Ltd umenzi ngobuchule isakhiwo sentsimbi e-China. Uyilo, unikezelo & fakela izakhiwo zentsimbi IAlgeria, iDubai, iSaudi Arabia, iThailand, iAustralia, iFrance, iJamani njlnjl. Logama nje unako ...
Ixabiso elisezantsi lesakhiwo sentsimbi esetyenzisiweyo indlu yebhokhwe yokuyila iinkukhu kwifama yoyilo
1.VANHE Iinkuku House Vanhe seemodyuli House Co., Ltd umenzi ngobuchule isakhiwo sentsimbi e-China. Uyilo, unikezelo & fakela izakhiwo zentsimbi IAlgeria, iDubai, iSaudi Arabia, iThailand, iAustralia, iFrance, iJamani njlnjl. 1). Ngokubanzi ...
China Prefabricated lokuhlambela Design zangaphandle zangasese eziphathwayo Mobile Shower Igumbi
1.Ingasese yangasese ephathekayo Indlu yangasese ephathekayo I-Prefab yangasese ephathekayo yile yesakhiwo sesakhelo esenziwe ngentsimbi edibeneyo. Ngokubanzi, amazantsi adityaniswe ngentsimbi yejelo okanye i-I-beam, kwaye ikholamu yenziwe ngentsimbi yesikwere. Izinto zodonga zenziwe ngeplate yentsimbi, iglasi yentsimbi, intsimbi engenasici, kunye neepleyiti zentsimbi eziqingqiweyo. Izindlu zangasese eziphathekayo zinobunzima obulula, ukusetyenziswa ngokulula, ukujonga okuhle ngenkangeleko. Izindlu zangasese ezizenzekelayo zizinto zangaphakathi ezinezixhobo zokuvala, isitya sokuhlamba, fan fan, ...
Ukufakwa ngokulula okuphathwayo kwendlu yangasese ephathekayo ye-EPS isandwich madecheap mobile wc yangasese yococeko
Indlu yangasese ephathekayo ye-1.Ithayile yangasese ephathekayo ityiwa kakhulu ibekwe kwindawo yoluntu ngaphandle, enje ngeedolophu, ipaki, indawo yabakhenkethi, iworkshop, indawo yokugcina izinto, njl. Indlu yangasese ephathekayo ilungile kwaye iyakwazi ukukhawulelana neemfuno zabantu zemihla ngemihla. Igumbi elinye Ubukhulu: 1.1.1MX1.1MX2.3H Igumbi ezimbini: 1.1.1MX2.2MX2.3H Igumbi elithathu: 1.1.1MX3.3MX2.3H Uhlobo lweSquat Toilet / Indlu yangasese ehleliyo ...
Ixabiso eliphantsi Ihowuliseyili yexabiso lokuhambisa izinto zangasese eziHambisekayo eziHambayo eziHambayo eziHambayo eziHambayo eziThengiswayo
Indlu yangasese ephathekayo ye-1.Ithayile yangasese ephathekayo ityiwa kakhulu ibekwe kwindawo yoluntu ngaphandle, enje ngeedolophu, ipaki, indawo yabakhenkethi, iworkshop, indawo yokugcina izinto, njl. Indlu yangasese ephathekayo ilungile kwaye iyakwazi ukukhawulelana neemfuno zabantu zemihla ngemihla. 2.IINKCUKACHA ZOMBALA ONGAKUMBI KUNYE NEZINTO EZININZI EZIDILIWEYO ZANGOKUJOYISWA. 3.Advantage 1.Customized uyilo: Uyakwazi ch ...